राजनीति, नाफाको ब्यपार या जनताको सेवा ? « Khabar24Nepal
खेमराज गिरी पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
भनिन्छ नि ” सच्चा राजनीतिज्ञ त्यो हो जो सदैव तन, मन, बचन र कर्मले जनता र देशकोबारेमा चिन्ता गर्दछ, चाहे उ जुनसुकै पार्टीको होस ।” अझ सच्चा मन र स्वच्छ आत्माले भन्नुपर्दा कम्युनिस्ट भनेको त यस्तो ब्यबस्था हो , जुन देशमा यो ब्यबस्था लागू भएको छ, ती देशका जनतालाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी भएका छन अपबादबाहेक । नेपालको सन्दर्भमा २००६ सालदेखि पुष्पलालले निर्माण गरेका कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न चरणमा टुट फुट र जुटको स्थितिमा रुमलिइरहे र अन्तत: प्रजातान्त्रीक पद्दति अप्नाउन थाले ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि विभिन्न चरणको आन्दोलनमा अग्र पंक्तिमा मोर्चाबन्दी पनि गरे । आज एकठाउँमा मिले तर भोली प्रतिकृयाबादी दलाल पूजिबादीहरुको चंगुलमा फंसीहाल्छन । बल्ल बल्ल कित्ताकाट हुन्छ अनि उहि भताभुङ ताल ! हो , यहि शृखलास्वरुप गणतन्त्र प्राप्तिपछिको तीन तहको सरकारको चुनावमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको मेल भयो र झन्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो । तैपनि पार्टी भित्र ब्यक्तिबादी कुन्ठा र पदलोलुपताले गर्दा जनताले चाहेनुरुप बिकास र जनहितको कार्यमा सरकारलाई आफ्नो हैसियत देखाउन सहज परिस्थितिको सृजना हुन सकेन । तथापि सरकार अगाडि बढ्दै गयो तर अन्तमा करिब तीन वर्ष कार्यकाल पुग्दा नपुग्दै आफ्नै सहकर्मीहरुको पदलोलुपताले कडा प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिएर आजै कुर्चि छोड , भोलि कुर्चि छोड भनि काम गर्ने वातावरण नमिलेपछि बाध्य भएर केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको छ । यसको बिरुद्दमा परेका दर्जनौं रीट निवेदनउपर सर्वोच्चमा मुद्दा बिचराधीन छ । नेकपाकै एक टोलीले संसद पुनस्थापनाको लागि सडक आन्दोलन गरिराखेको छ । प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्रेसलगाएत अन्य दलहरु अझै मौन छन । काङ्रेसको लागि पाडी या पाडो जे पाएपनि बेउती भएको छ । शेरबहादुर देउवाले त सर्वोच्चको फैसला मान्ने अभिब्यक्ति दिइसकेका छन भने नेकपा नेपाल दहाल समुह भने अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको आशा गरेका तर भर नभएको अभिब्यक्ति दिंदै यदि पुनस्थापना भएन भने खबरदारीका स्वरहरु पनि गुन्जाइरहेका छन ।
उता महामहिम सम्माननीय रास्ट्रपतिप्रति अपशब्दहरु प्रयोग गरिएको भन्दै नेत्री रामकुमारी झांक्रीलाई पक्राउ गरि अब उप्रान्त यस्ता शब्दहरु प्रयोग नगर्ने बाचाकासाथ छोडिएको छ । यसरी कथित आन्दोलनमा सरिक हुने केहि ब्यक्तिहरुको आसय बुझ्दा कोहि जबर्जस्ती ल्याइएका र कोहि स्वस्फुर्तरुपमा आएको पाइयो । यसरी दुइ तिहाई जनताको बहुमतको सरकार हुंदा हुदै पनि ब्यक्तिगत पद र कुन्ठा, बाहिय शक्तिहरुको सन्नाटा अनि विभिन्न गुट र उपगुटको कारण नेकपा अहिले फुटको संघारमा पुगेको छ । यसरी सरकारमा नेकपा, प्रतिपक्षी नेकपा, अग्रगामी नेकपा, प्रतिगामी नेकपा, आमसभा गर्ने नेकपा, आमसभा बिथोल्ने नेकपा, बन्द गर्ने/गराउने नेकपा, बन्दको विरोध गर्ने नेकपा, कुट्ने नेकपा, कुटाई खाने नेकपा, MCC समर्थक नेकपा, MCC बिरोधी नेकपा , राम्रो भए आफु , नराम्रो भए सरकार तर रमिते काङ्रेस , राजपा र राजावादीहरु अनि तमासा हेर्नुपर्ने जनताले कहिलेसम्म ? र त भन्न र बुझ्नै मनलाग्छ कि, राजनीति भनेको नाफाको ब्यपार या जनताको सेवा ?
प्रचण्ड-माधवलाई नरभक्षी आन्दोलन नगर्न प्रम ओलीको चेतावनी
मुख्यमन्त्री शाहीद्धारा रारा तालमा साईकिलिङ मार्गको शिलान्यास
दाङमा चिसो बढे पछी २ दिनको लागि घोराहीका विद्यालयहरु बन्द